လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို မွေးမြူပါ။ - For her Myanmar
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို မွေးမြူပါ။
ဘာဆိုင်လဲ မမေးနဲ့.. ဒါတွေ ဒီလို ဆိုင်ပါတယ် 😉
ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာ ဘယ်လိုရာထူးနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နေပါစေ.. ဘဝအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုမှာ ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြင့်ဆုံးကို ရရှိဖို့ မျှော်လင့်တတ်ကြတာ လူတိုင်းနီးနီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်တကယ် အောင်မြင်တဲ့သူတွေကတော့ နည်းကြပါတယ်။ ဒီလို အောင်မြင်ကြွယ်ဝနေတဲ့သူတွေနဲ့ သာမန်လူတွေကို ခွဲခြားထားတာဟာ တကယ်တမ်းကတော့ စိတ်နေသဘောထားပါပဲ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင် အောင်မြင်မှုရရှိချင်တဲ့သူအတွက် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်လိုမျိုး စိတ်နေသဘောထားကို ကျင့်သုံးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဆန်တဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုက လုပ်ငန်းခွင်ဘဝမှာ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပေးပါလိမ့်မယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လိုမျိုး စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး ပြုမူဖို့ မွေးမြူရမယ့် စိတ်နေစိတ်ထားတွေအတွက် အချက် (၇) ချက်ကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ပြင်းပြတဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ပြပါ။
စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာ စိတ်အားထက်သန်မှု ပြင်းပြင်းပြပြရှိကြတယ်လို့ ကျော်ကြားပါတယ်။ ပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုက ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ထားတာထက် ပိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို အမြင့်ဆုံးထိ ရောက်ရှိသွားစေပါတယ်။ ဒါက လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုနဲ့ ဘဝပြီးပြည့်စုံမှုတွေအတွက် သော့ချက်ပါပဲ။
ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအပေါ် စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ကိုယ် မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာ စိတ်ကူးယဉ်မနေဘဲနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာရောက်အောင် ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အရာတွေထဲမှာ ပိတ်မိနေတယ်လို့ မခံစားပါနဲ့။ အဲဒီအစား ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို တခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ သို့မဟုတ် တခြားဌာနမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ပါ။
၂။ Customer တွေပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ပါ။
လုပ်ငန်းခွင်က ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေအကြောင်း စဉ်းစားနေရင်းနဲ့ Customer (စားသုံးသူ/ ဖောက်သည်) တွေအပေါ် အာရုံစိုက်ဖို့ မကြာခဏ မေ့တတ်ကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ Customer တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ရမှာလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး… ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တခြားအရေးကြီးတဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ကိုယ်နဲ့ နေ့စဉ်ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေ အားလုံးကိုလည်း အမြဲလိုလို လေးစားသမှုနဲ့ ဆက်ဆံပေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဘယ်လို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လို တိုးတက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာကို အမြဲ ကြံစည်တွေးတောနေသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အထက်လူကြီးတွေ၊ စားသုံးသူတွေကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ပေးတာက ယောင်းတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင် တိုးတက်ရေးအတွက် ကျောရိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
၃။ ကိုယ့်အလုပ်ကို တာဝန်ယူမှုရှိပါ။
ကိုယ့်အလုပ်အပေါ် တာဝန်ယူတာက အောင်မြင်တဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်သာမက အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမှားတွေနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် တခြားသူတွေကို အပြစ်တင်နေမယ့်အစား တာဝန်ယူပြီး အမှားထဲက သင်ယူကာ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေပါ။ အသင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ မမျှတတဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေအပေါ် ပြစ်တင်ပြောဆိုနေမယ့်အစား ကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင်ဦးရွက်လုပ်ပြီး အသင်းမှာ အားကိုးရသူဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ တစ်ဖက်မှာ ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အသွေးကိုပြသခွင့်ရမယ့် လုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့ ပရောဂျက်တွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။
၄။ ထိရောက်မှုမရှိတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေက ထိရောက်မှုမရှိဘဲ အလကားဖြစ်သွားမယ့် အရာတွေကို လုပ်ဆောင်လေ့ မရှိပါဘူး။ ကုမ္ပဏီသေးသေးလေးတွေမှာက ထုံးထမ်းစဉ်လာအရ အဆင့်ဆင့်လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ မရှိတဲ့အတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲနိုင်သလို ပိုထိရောက်မယ့် နည်းလမ်းတွေအတွက်လည်း အချိန်ဆိုင်းနေခြင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီလိုအခြေအနေအထိ ကိုယ်က ချက်ချင်း မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ့်ကုမ္ပဏီမှာ ဘာတွေ လိုအပ်နေတယ်၊ ဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ ဘယ်လို တိုးတက်မှုတွေ ရလာအောင် ဘယ်ပုံ ဖြေရှင်းရမယ် စတာတွေကို စဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။ ဒါက ကုမ္ပဏီအတွက် ရေရှည်မှာ တန်ဖိုးတက်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်မယ့် ရွှေရောင်အခွင့်အလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
စွန့်စားမှုတွေများလာတာနဲ့အမျှ ရလာမယ့် ရလဒ်က ပိုကောင်းလာမှာပါ။ စွန့်စားမှုတွေကို သဘောကျတာက စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို သာမန်လူတွေကနေ ကွာခြားသွားစေပါတယ်။ ကိုယ်က ကြိုးစားပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ရမယ်၊ စွန့်စားတာက တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကို စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေတိုင်းက သိကြပါတယ်။
အလုပ်မှာလည်း စွန့်ုစားမှုတွေကို မွေးမြူနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကနေ ထွက်ပြီး အတွေးအခေါ်အသစ်တွေ လက်ခံတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် စိန်ခေါ်မှုတွေလုပဖို့ တက်တက်ကြွကြွ စိတ်ဝင်တစား လုပ်ဆောင်တာမျိုး စတာတွေကနေ စတင်နိုင်ပါတယ်။ စွန့်စားမှုရဲ့ ရလဒ်တွေက ကိုယ့်ကို စွမ်းရည်အသစ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်သလို ကုမ္ပဏီရဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေဆီကနေ ကိုယ့်ကို ရာထူးတိုးပေးဖို့အတွက် သဘောတူညီချက်တွေကို ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့မရထားဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ?
၆။ ကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် လုပ်ဆောင်ပါ။
ဝန်ထမ်း တော်တော်များများက ကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုထက် ကိုယ့်အတွက် ရပိုင်ခွင့်တွေကိုသာ စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။ ၉ နာရီကနေ ၅ နာရီထိ အလုပ်လုပ်တာက ကုမ္ပဏီအတွက် လုံလောက်တာမို့ နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာ လစာတိုးပေးတာ၊ အပိုဆုငွေရတာက မလွဲမသွေဖြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကုမ္ပဏီက ဘယ်လောက်ပြန်ပေးနိုင်လဲဆိုတာက ကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာ မူတည်နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုကို ရှေ့ရှုတယ်၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဝင်ငွေတွေနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို တိုးတက်အောင် အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးကလည်း အလိုလို မြင့်တက်လာမှာပါပဲ။
၇။ အိပ်မက်တွေကို မကန့်သတ်ပါနဲ့။
စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုမှာ အရေးကြီးဆုံးရှုထောင့်က အိပ်မက်ကြီးကြီးမားမားမက်ခြင်းနဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက လက်တွေ့ကျပြီး တကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို တွေးကြတဲ့အတွက် အိပ်မက်တွေက သေးငယ်သထက် သေးငယ်လာကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို စွန့်လွှတ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အမှန်က အိပ်မက်ကြီးကြီးမက်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှသာ အိပ်မက်တွေကို ရရှိဖို့ အင်မတန်ကြိုးစားလာမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကြိုးစားမှုက တန်ဖိုးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရာထူးက ဘာပဲဖြစ်နေပါစေ၊ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် အဖြစ် ခံစားကြည့်ပါ။ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်တိုင်က စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါစေ။ ကိုယ်လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ အခွင့်အလမ်းတွေကို ရယူပါ။ စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ယောက်လိုမျိုး စိတ်နေသဘောထားကို မွေးမြူခြင်းက ကိုယ် စိတ်ကူးထားတဲ့ အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်နေရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိရာထူးမှာလည်း တိုးတက်မှုရရှိပြီး ကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဆိုငျလဲ မမေးနဲ့.. ဒါတှေ ဒီလို ဆိုငျပါတယျ 😉
ဘယျကုမ်ပဏီမှာ ဘယျလိုရာထူးနဲ့ပဲ အလုပျလုပျနပေါစေ.. ဘဝအပျေါ စိတျကနြေပျမှုနဲ့ ငှရေေးကွေးရေးဆိုငျရာ တိုးတကျမှုမှာ ဖွဈနိုငျသမြှ အမွငျ့ဆုံးကို ရရှိဖို့ မြှျောလငျ့တတျကွတာ လူတိုငျးနီးနီးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ တကယျ့တကယျ အောငျမွငျတဲ့သူတှကေတော့ နညျးကွပါတယျ။ ဒီလို အောငျမွငျကွှယျဝနတေဲ့သူတှနေဲ့ သာမနျလူတှကေို ခှဲခွားထားတာဟာ တကယျတမျးကတော့ စိတျနသေဘောထားပါပဲ။
ကုမ်ပဏီတဈခုမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ ဝနျထမျးပဲဖွဈတယျဆိုရငျတောငျ အောငျမွငျမှုရရှိခငျြတဲ့သူအတှကျ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျလိုမြိုး စိတျနသေဘောထားကို ကငျြ့သုံးဖို့ အကွံပွုလိုပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျငနျးရှငျဆနျတဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုက လုပျငနျးခှငျဘဝမှာ ထူးခွားကောငျးမှနျတဲ့အကြိုးကြေးဇူးတှကေို ပေးပါလိမျ့မယျ။ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတဈယောကျလိုမြိုး စဉျးစားတှေးချေါပွီး ပွုမူဖို့ မှေးမွူရမယျ့ စိတျနစေိတျထားတှအေတှကျ အခကျြ (၇) ခကျြကို အောကျမှာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ပွငျးပွတဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုကို ပွပါ။
စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှကေ သူတို့လုပျနတေဲ့အလုပျတှပေျေါမှာ စိတျအားထကျသနျမှု ပွငျးပွငျးပွပွရှိကွတယျလို့ ကြျောကွားပါတယျ။ ပွငျးပွတဲ့စိတျအားထကျသနျမှုက ကိုယျလုပျနိုငျတယျလို့ ထငျထားတာထကျ ပိုဖွဈစနေိုငျပွီး ကိုယျ့ရဲ့ လုပျနိုငျစှမျးကို အမွငျ့ဆုံးထိ ရောကျရှိသှားစပေါတယျ။ ဒါက လုပျငနျးအောငျမွငျမှုနဲ့ ဘဝပွီးပွညျ့စုံမှုတှအေတှကျ သော့ခကျြပါပဲ။
ကိုယျလုပျနတေဲ့အလုပျတှအေပျေါ စိတျအားထကျသနျမှုမရှိဘူးဆိုရငျ ကိုယျ မလုပျနိုငျတဲ့အရာတှပေျေါမှာ စိတျကူးယဉျမနဘေဲနဲ့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ နရောရောကျအောငျ ကိုယျ့ရဲ့အလုပျကို ဘယျလိုတိုးတကျအောငျ လုပျနိုငျမလဲဆိုတာကို စဉျးစားပါ။ ကိုယျလုပျနတေဲ့ အရာတှထေဲမှာ ပိတျမိနတေယျလို့ မခံစားပါနဲ့။ အဲဒီအစား ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို တခွားလုပျငနျးနယျပယျ၊ သို့မဟုတျ တခွားဌာနမှာ ပွနျလညျအသုံးပွုနိုငျအောငျ စီစဉျပါ။
၂။ Customer တှပေျေါမှာ အာရုံစိုကျပါ။
လုပျငနျးခှငျက ဝနျထမျးတှဟော ဖွဈလာနိုငျဖှယျရှိတဲ့ အလုပျတာဝနျတှအေကွောငျး စဉျးစားနရေငျးနဲ့ Customer (စားသုံးသူ/ ဖောကျသညျ) တှအေပျေါ အာရုံစိုကျဖို့ မကွာခဏ မတေ့တျကွပါတယျ။ ကုမ်ပဏီရဲ့ Customer တှကေိုပဲ အာရုံစိုကျရမှာလားဆိုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး… ကိုယျ့ရဲ့ပတျဝနျးကငျြမှာ တခွားအရေးကွီးတဲ့ ပါဝငျပတျသကျသူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့အထကျလူကွီးတှေ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ၊ ကိုယျနဲ့ နစေ့ဉျဆကျဆံနရေတဲ့သူတှေ အားလုံးကိုလညျး အမွဲလိုလို လေးစားသမှုနဲ့ ဆကျဆံပေးသငျ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ဘယျလို ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမလဲ၊ ကိုယျ့ရဲ့ ဝနျဆောငျမှုကို ဘယျလို တိုးတကျအောငျ လုပျမလဲဆိုတာကို အမွဲ ကွံစညျတှေးတောနသေငျ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ အထကျလူကွီးတှေ၊ စားသုံးသူတှကေို အကောငျးဆုံး ဝနျဆောငျမှု ပေးတာက ယောငျးတို့ရဲ့ အလုပျအကိုငျ တိုးတကျရေးအတှကျ ကြောရိုးဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
၃။ ကိုယျ့အလုပျကို တာဝနျယူမှုရှိပါ။
ကိုယျ့အလုပျအပျေါ တာဝနျယူတာက အောငျမွငျတဲ့ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှအေတှကျသာမက အောငျမွငျတဲ့သူတိုငျးအတှကျ အရေးကွီးဆုံးကဏ်ဍတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။ အမှားတှနေဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတှအေတှကျ တခွားသူတှကေို အပွဈတငျနမေယျ့အစား တာဝနျယူပွီး အမှားထဲက သငျယူကာ ပိုကောငျးအောငျ လုပျဖို့အတှကျ နညျးလမျးတှကေို ရှာဖှပေါ။ အသငျးခေါငျးဆောငျတှနေဲ့ အဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ မမြှတတဲ့ ဆကျဆံမှုတှအေပျေါ ပွဈတငျပွောဆိုနမေယျ့အစား ကိုယျတိုငျက ဦးဆောငျဦးရှကျလုပျပွီး အသငျးမှာ အားကိုးရသူဖွဈအောငျ လုပျပါ။ တဈဖကျမှာ ကိုယျ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ အခွအေနပေျေါလိုကျပွီး ကိုယျ့ရဲ့ အရညျအသှေးကိုပွသခှငျ့ရမယျ့ လုပျငနျးတာဝနျတှနေဲ့ ပရောဂကျြတှကေို လုပျဆောငျပါ။
၄။ ထိရောကျမှုမရှိတာတှကေို ရှောငျကွဉျပါ။
စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှကေ ထိရောကျမှုမရှိဘဲ အလကားဖွဈသှားမယျ့ အရာတှကေို လုပျဆောငျလေ့ မရှိပါဘူး။ ကုမ်ပဏီသေးသေးလေးတှမှောက ထုံးထမျးစဉျလာအရ အဆငျ့ဆငျ့လုပျရတဲ့ လုပျငနျးစဉျတှေ မရှိတဲ့အတှကျ မွနျမွနျဆနျဆနျ ပွောငျးလဲနိုငျသလို ပိုထိရောကျမယျ့ နညျးလမျးတှအေတှကျလညျး အခြိနျဆိုငျးနခွေငျးမရှိဘဲ ဆောငျရှကျနိုငျပါတယျ။
တကယျလို့ ဒီလိုအခွအေနအေထိ ကိုယျက ခကျြခငျြး မလုပျနိုငျသေးဘူးဆိုရငျတောငျ ကိုယျ့ကုမ်ပဏီမှာ ဘာတှေ လိုအပျနတေယျ၊ ဘယျလုပျငနျးစဉျမှာတော့ ဘယျလို တိုးတကျမှုတှေ ရလာအောငျ ဘယျပုံ ဖွရှေငျးရမယျ စတာတှကေို စဉျးစားထားသငျ့ပါတယျ။ ဒါက ကုမ်ပဏီအတှကျ ရရှေညျမှာ တနျဖိုးတကျလာအောငျ ဖနျတီးနိုငျမယျ့ ရှရေောငျအခှငျ့အလမျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။
စှနျ့စားမှုတှမြေားလာတာနဲ့အမြှ ရလာမယျ့ ရလဒျက ပိုကောငျးလာမှာပါ။ စှနျ့စားမှုတှကေို သဘောကတြာက စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှကေို သာမနျလူတှကေနေ ကှာခွားသှားစပေါတယျ။ ကိုယျက ကွိုးစားပွီး စမျးသပျကွညျ့ရမယျ၊ စှနျ့စားတာက တနျဖိုးရှိတယျဆိုတာကို စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှတေိုငျးက သိကွပါတယျ။
အလုပျမှာလညျး စှနျု့စားမှုတှကေို မှေးမွူနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ သကျသောငျ့သကျသာဖွဈတဲ့အခွအေနကေနေ ထှကျပွီး အတှေးအချေါအသဈတှေ လကျခံတာမြိုး ဒါမှမဟုတျ စိနျချေါမှုတှလေုပဖို့ တကျတကျကွှကွှ စိတျဝငျတစား လုပျဆောငျတာမြိုး စတာတှကေနေ စတငျနိုငျပါတယျ။ စှနျ့စားမှုရဲ့ ရလဒျတှကေ ကိုယျ့ကို စှမျးရညျအသဈတှကေို ပေးစှမျးနိုငျသလို ကုမ်ပဏီရဲ့ စီမံခနျ့ခှဲသူတှဆေီကနေ ကိုယျ့ကို ရာထူးတိုးပေးဖို့အတှကျ သဘောတူညီခကျြတှကေို ရရှိစပေါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> နိုငျငံခွားတက်ကသိုလျကနေ ဘှဲ့မရထားဘဲ လုပျငနျးခှငျမှာ အောငျမွငျအောငျ ဘယျလို လုပျရမလဲ?
၆။ ကုမ်ပဏီရဲ့အောငျမွငျမှုအတှကျ လုပျဆောငျပါ။
ဝနျထမျး တျောတျောမြားမြားက ကုမ်ပဏီရဲ့အောငျမွငျမှုထကျ ကိုယျ့အတှကျ ရပိုငျခှငျ့တှကေိုသာ စဉျးစားတတျကွပါတယျ။ ၉ နာရီကနေ ၅ နာရီထိ အလုပျလုပျတာက ကုမ်ပဏီအတှကျ လုံလောကျတာမို့ နှဈတဈနှဈကုနျဆုံးတဲ့အခြိနျမှာ လစာတိုးပေးတာ၊ အပိုဆုငှရေတာက မလှဲမသှဖွေဈသငျ့တယျလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကုမ်ပဏီက ဘယျလောကျပွနျပေးနိုငျလဲဆိုတာက ကုမ်ပဏီရဲ့အောငျမွငျမှုပျေါမှာ မူတညျနပေါလိမျ့မယျ။ ကိုယျက ကုမ်ပဏီရဲ့အောငျမွငျမှုကို ရှရှေု့တယျ၊ ကုမ်ပဏီရဲ့ ဝငျငှတှေနေဲ့ လုပျငနျးစဉျတှကေို တိုးတကျအောငျ အလုပျလုပျတယျဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ တနျဖိုးကလညျး အလိုလို မွငျ့တကျလာမှာပါပဲ။
၇။ အိပျမကျတှကေို မကနျ့သတျပါနဲ့။
စှနျ့စားတီထှငျသူတှရေဲ့အောငျမွငျမှုမှာ အရေးကွီးဆုံးရှုထောငျ့က အိပျမကျကွီးကွီးမားမားမကျခွငျးနဲ့ မဖွဈနိုငျတဲ့အရာတှကေို ဖွဈအောငျ ပွုလုပျခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက လကျတှကေ့ပြွီး တကယျဖွဈနိုငျတဲ့ အရာတှကေို တှေးကွတဲ့အတှကျ အိပျမကျတှကေ သေးငယျသထကျ သေးငယျလာကွပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အိပျမကျတှကေို စှနျ့လှတျဖို့ မလိုပါဘူး။ အမှနျက အိပျမကျကွီးကွီးမကျဖို့ပဲ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါမှသာ အိပျမကျတှကေို ရရှိဖို့ အငျမတနျကွိုးစားလာမှာဖွဈပွီး နောကျဆုံးမှာ ကွိုးစားမှုက တနျဖိုးရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။
ကိုယျ့ရာထူးက ဘာပဲဖွဈနပေါစေ၊ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတဈယောကျ အဖွဈ ခံစားကွညျ့ပါ။ လုပျဆောငျကွညျ့ပါ။ ကိုယျတိုငျက စှနျ့ဦးတီထှငျ လုပျငနျးရှငျတဈယောကျ ဖွဈနပေါစေ။ ကိုယျလကျရှိ ရောကျနတေဲ့နရောမှာ အခှငျ့အလမျးတှကေို ရယူပါ။ စှနျ့ဦးတီထှငျသူတဈယောကျလိုမြိုး စိတျနသေဘောထားကို မှေးမွူခွငျးက ကိုယျ စိတျကူးထားတဲ့ အနာဂတျအတှကျ ပွငျဆငျနရေငျးနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ လကျရှိရာထူးမှာလညျး တိုးတကျမှုရရှိပွီး ကုမ်ပဏီအတှကျ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိစမှောဖွဈပါတယျ။
Tags: Career, Cultivate, entrepreneur, improvement, Mindset
Wynee Myanmar January 2, 2019